AMBILOBE - FIAROVANA TONTOLO IAINANA : Raikitra ny fambolena ala honko aty Diana
Ny jono no anisan’ny miantoka ny toekarena ao Ambilobe. Betsaka ny ezaka natao hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina. 19 avril 2017
Miara-miasa ireo mpiara-miombon’antoka iraisam-pirenena sy eto an-toerana misahana ny Tontolo iainana.
Tamin’ny sabotsy lasa teo no nisy ny fambolena honko, ho fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina, izay natrehan’ny Lehiben’ny Faritra Diana, ny minisitry ny Jono, ny Lehiben’ny Distrika ao Ambilobe, miaraka tamin’ireo vondron’olona ifotony. Nanoina ny antso amin’ny fiarovana ny tontolo iainana koa ireo tantsaha sy ny mpianatra sy ireo mpiara-miombon’antoka marobe.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasa fanarenana ireo voly ala honko ataon’ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana, Wwf, eto Ambilobe ny fambolena ala honko natao ny sabotsy teo. Ho fitsinjovana ny vokatra haza an-dranomasina, toy ny drakaka sy ny makamba, izay tsy nitsaha-nihena tato anatin’ny taona vitsivitsy noho ny fahapotehan’ny ala honko.
Lohahevitra ho an’ity fambolena honko anatin’ny Faritra Diana, natao tao Anjiabe ity ny hoe ny "Ala honko voaaro miantoka ny fiveloman-tena maharitra". Niisa 800 mahery ireo manam-pahefana sy olon-tsotra namboly ala hnoko niisa100 000 propagalus, tamina velaran-tany 10 ha. Anisan’ny fari-dranomasina lehibe eto Ambilobe mivelona amin’ny jono ny ao Anjiabe. Hitondra tombontsoa ho an’ny mponina ireo hazo honko ireo.